गिद्धे दृष्टीले देखेको टिपेक्स र दुखाईमा मल्हम लगाउने त्यो बाबुरामलाइ हृदयबाट सलाम – ठाकुर – Sanghiya Online
गिद्धे दृष्टीले देखेको टिपेक्स र दुखाईमा मल्हम लगाउने त्यो बाबुरामलाइ हृदयबाट सलाम – ठाकुर
Posted on : June 8, 2020 - No Comment
अधिवक्ता बिरेन्द्र ठाकुर
देशको दशा र दिशा र्दुदर्शा तर्फको अग्रसरतालाई व्रेक गलाउने गरी प्रतिगमनका ढाडमा टेकेर अग्रगमनमा जाने माहिर खेलाडी हुन डा. बाबुराम भट्टराई भन्ने एक पटक फेरी सिद्ध गरेका छन । यथास्थितमा वस्ने र वस्न वाध्य गराउने ति नश्लिय हातवाट सदा सर्वदाको लागि आज विभेदकारीहरुको सत्ता खोसिदैछ, । सिंहासन हल्लीएको छ ।, केही शुभेक्छुक स्तब्ध छन् । खिन्न छन । सोच्दैछन के खोसिएको छ । विभेदको चुलीमा आफुले शुलि रोजेका ति सवै खस आर्य , मधेशी, आदिवासी जनजाती, शिल्पी दलित, मुस्लिम, थारु अगुवाहरु शिकारीको शिकारवाट आजित रहेको तितो यर्थात हो । आजको दिनमा सिंहदरवारका सिंहहरुको कुशासनवाट मुक्तीको विगुल फुक्ने डा. बाबुराम वास्तवमा आधा ग्लास पानी र आधा गिलास खालि छ भन्ने यथार्थको धरातल टेकि आलोचनाको पर्वाह नगरी विभेदको दुखाईमा मल्हम लगाउन मधेश झरेका थिए । आज बाबुराम उकाली आरोली गर्दे दुस्मनको शवै किल्ला ढाल्दै टाउको टेक्दै सगरमाथाको चुचुरो नै टेकेका छन् ।
एकात्मक राज्यसत्ताका गिद्धे दृष्टिमा उनी जति वेजाती , वेइमानी रहे भए पनि नम्वरमा नपरेको भए पनि उनी नम्वर वान नै छन र सधै रहने छन् भन्ने विश्वास रहेको छ । अरिङ्गाल र छौडा असन्तुस्टका गिद्धहरुको सिनोको रुपमा दर्शाईको यो सेतो टिपेक्स होइन उनको वलिदानीको उचाई दर्शाउद छ । त्यो कुनै सिमा नाका वेच्ने कालो धव्बा होइन । यो हिउँ जस्तै स्वछ निर्मल र निसकलंक रहेको छ ।
ओहदा र पदको लागि तछाड मछाड गर्नेहरुको विच आफुलाई मेटने आट गरेका उनी साहासी सन्तान हुन उनका हातमा रहेको हामी औंलाहरुवाट उनको अग्रगमनकारी आर्टिेक्चरयल इन्जिनियरीङ्ग शिक्षावाट नयाँ नेपालको मुहार फेर्न सवैको सामुन्ने नेपालको नयाँ नक्सा कोर्न आज पनि सक्षम छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रिय एकता र शुद्धिकरणको दिशामा उनको यस कदमलाई मेरा हृदयवाट सलाम छ । आउनुस सवै नयाँ नेपालको निर्मााण्मा हाथेमालो गरौ नयाँ जग वसालो , नयाँ तिथि र निति निर्माण गरौ फेरी एक पटक शुद्धिकरणको आभियानमा जुटौ ।
युरोपियन युनियन तथा पश्चिमा दुष्टको दोकला चरित्र
मधेश आन्दोलनका सर्बोच्च कमान्डर उपेन्द्रको जीत अर्थात् गजेन्द्रबाबुको सच्चा श्रद्धाञ्जली